Akụkọ - Covid-19 nwere ike ịlanarị n'elu ọla kọpa?
Covid-19 ọ nwere ike ịlanarị n'elu ọla kọpa?
Ọla kọpa bụ ihe antimicrobial kachasị dị irè maka elu.
Ruo ọtụtụ puku afọ, ogologo oge tupu ha amata banyere germs ma ọ bụ nje, ndị mmadụ amawo ikike ndị na-egbu ọla kọpa.
Ojiji ọla kọpa nke mbụ edekọrọ edekọ dị ka onye na-egbu ọrịa sitere na Smith's Papyrus, akwụkwọ ahụike kacha ochie amara n'akụkọ ihe mere eme.
N'ihe dị ka 1,600 BC, ndị China ji mkpụrụ ego ọla kọpa mee ọgwụ iji gwọọ obi mgbu na afọ mgbu yana ọrịa eriri afo.
Na ọla kọpa ike na-adịru. Ndị otu Keevil nyochara ụgbọ okporo ígwè ochie na New York City's Grand Central Terminal afọ ole na ole gara aga. "Ọla kọpa ahụ ka na-arụ ọrụ dị ka ọ na-arụ n'ụbọchị etinyere ya ihe karịrị otu narị afọ gara aga," ka ọ na-ekwu. "Ihe a na-adịgide adịgide na mmetụta mgbochi microbial adịghị apụ apụ."
Kedu ka ọ si arụ ọrụ?
Ngwakọta atọmịk nke ọla kọpa na-enye ya ike igbu mmadụ. Ọla kọpa nwere eletrọn n'efu n'ime mpụta orbital shei nke electrons nke na-esonye na mmeghachi omume mbelata oxidation (nke na-emekwa ka igwe ahụ bụrụ ezigbo onye ndu).
Mgbe microbe na-adakwasị ọla kọpa, ions na-agbawa nje ahụ dị ka mwakpo nke ogbunigwe, na-egbochi iku ume cell na ịkụ ọkpọ n'ime akpụkpọ ahụ cell ma ọ bụ mkpuchi nje na ịmepụta radicals n'efu nke na-eme ka igbu mmadụ dịkwuo ngwa, karịsịa n'elu ala akọrọ. Nke kachasị mkpa, ions na-achọ ma bibie DNA na RNA n'ime nje bacteria ma ọ bụ nje, na-egbochi mmụgharị na-emepụta nnukwu ahụhụ na-eguzogide ọgwụ.
Nnyocha ọhụrụ chọpụtara na SARS-CoV-2, nje na-akpata ọrịa na-efe efe na-efe efe, anaghịzi efe efe na ọla kọpa n'ime awa 4, ebe ọ nwere ike ịdị ndụ n'elu plastik ruo awa 72.
Ọla kọpa nwere ihe antimicrobial, nke pụtara na ọ nwere ike igbu microorganisms dị ka nje bacteria na nje. Otú ọ dị, microorganism ahụ aghaghị ịbịakwute ọla kọpa ka e wee gbuo ya. Nke a ka a na-akpọ "ịgbu kọntaktị."
Ngwa nke ọla kọpa antimicrobial:
Otu n'ime ngwa ngwa ọla kọpa dị n'ụlọ ọgwụ. Ihe kacha pụta ìhè n'ime ụlọ ụlọ ọgwụ - okporo ụzọ akwa, bọtịnụ oku, ogwe aka oche, tebụl tray, ntinye data, na okporo osisi IV - wee jiri ọla kọpa dochie ha.
E jiri ya tụnyere ọnụ ụlọ ndị e ji ihe ọdịnala mee, enwere mbelata 83% nke ibu nje n'elu elu ụlọ ndị nwere ihe ọla kọpa. Na mgbakwunye, ọnụ ọgụgụ ndị ọrịa butere ọrịa site na 58%.
Ihe ọla kọpa nwekwara ike ịba uru dị ka ebe mgbochi nje na ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọrụ nri, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ akụ na ihe ndị ọzọ.